China Soft PVC Key ukuvaleka mveliso kunye nabenzi | SJJ
Ikhava yesitshixo sePVC ethambileyo ikwanamagama njengekepusi ephambili, into yokwazisa egqibeleleyo ayinokuhombisa kuphela isitshixo sakho, kodwa ikwanyusa ishishini lakho okanye umbutho.
Ithambile Isitshixo sePVCzizinto ezintle ukukhusela amaqhosha akho kunye nokubonisa iimveliso zakho kunye nezinto ezikhethekileyo. Iifayile eziphambili ze-PVC zenziwe ngezinto eziphathekayo ze-PVC, kunye nokufa okubethekileyo okufezekisiweyo ukufezekisa iimilo ezahlukeneyo kunye neelogo. Izitshixo zakho zeminyango, iimoto, amatyala njlnjl. Ezenziwe zizinto zesinyithi kunokuba lula ukuba zenziwe ioksijini, ukubeka iSoftIsitshixo sePVCinokukhusela kwaye ithintele izitshixo zenziwe i-oxidized, oku kugcina izitshixo zintsha kwaye zikhanya. Ukubeka ezinye izinto ezinamathelisiweyo njengezibane ezinebhetri ngaphakathi kwePVC ethambileyo inokusetyenziswa njengetotshi. Uyilo olwahlukileyo lwezikhuselo eziphambili lunokubonisa uphawu lwakho olukhulu, ukubonisa iimveliso zakho ngokukhethekileyo. Ubungakanani obuncinci bezikhuselo eziphambili zePVC kulula ukugcina okanye ukuzisa naphina. Izinto eziphathekayo zinobuhlobo kwaye aziyityhefu kwindalo esingqongileyo, zinokudlula eMelika okanye kwimigangatho yokuvavanya yaseYurophu. Yonke imibala yePMS iyafumaneka, imibala emininzi inokufezekiswa kwinto enye. Iinkcukacha zingaboniswa ngokungqinelana noyilo lwakho.
Ukhetho oluqhelekileyo lokuNcamathisela: Isangqa sokutsiba, isangqa esisisitshixo, amakhonkco eMetri, imitya, Iibhola zemixokelelwane, izibane, ibhetri njl.
Egqithileyo Izitshixo eziphambili zePVC
Okulandelayo: Soft PVC Bottle evulekileyo
izitshixo eziphambili ziyathengiswa
uthambile PVC Key ukuvaleka